တꨯးꨁိူဝ်းယ်ꨮꨲ ꨵꨵꨵꨵꨵꨵ ꨵ ꨲꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ
မ်ꨮꨲသုင်ꨁꨣꨳ ယိꨓ်းꨅူမ်းꨟပ်ꨵတွꨓ်ꨶယူꨲꨀူꨶꨁꨤဝ်းယꨤမ်းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨵꨵꨵꨵꨵ ꨟ်ꨮꨳယူꨲလီမီးငိုꨓ်း ꨟ်ꨮꨳꨟꨤင်ꨶလီꨀိုꨀ်းပိုꨓ်း ꨀူꨶꨅဝ်ꨳ ꨀူꨶေꨀꨣꨲꨵ သေꨀမ်းꨁꨣꨳေꨡꨣꨶ
November 13, 2013 at 4:29pm
Ãချောအလှပိုသူ မောနှမပျိုဖြူ နမ့်မောမြစ်ကို အမှီပြု၍ (ယခုရွှေလီ) သျှမ်းနိုင်ငံတော်ကြီးသည် AD -649 တွင် အရှေ့ဘက် နန်ချိုသျှမ်း နိုင်ငံတော်ကြီး၏ သျှမ်းပြည်ထောင်စု (၉)ခုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည် “နန်ချို ဧရာဇ် ခွန်လူဖုန်း” (AD -753 – 763 )မောသျှမ်းကိုး ပြည်ထောင်တွင် ပါဝင်ခဲ့သော
၁။ မိုးကောင်း = ၉၉မြို့ ၂။ မိုးညှင်း = ၃၇မြို့ ၃။ သောင်သွတ် = ၂၈မြို့ ၄။ မိုးမိတ် = ၄၉မြို့ ၅။ သိန္နီ = ၄၉မြိူ့ ၆။ သီပေါ = ၂၉မြို့ ၇။ မိုးနဲ = ၃၇မြို့ ၈။ ညောင်ရွှေ = ၃၉မြို့ နန်ချို သျှမ်းဧကရာဇ်မင်းဆက် (AD 650-1252 ) နှောင်း၌တစ်ဦး၊ မောသျှမ်းတိုင်းပြည် စယ်လန့် ဧကရာဇ်မင်းဆက်” (AD 1300-1772 ) ၌တစ်ဦး၊ မိုးညှင်းမင်းတရားကြီး စ၀်စောလုံ၏သား အာဝနန်းရှင် သိုဟန်ဘွား (AD 1505-1547 ) ကတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အားလုံးသည် “ဆို” မင်းနွယ်ဝင်များမှ ဖြစ်ကြပါသည်။ မေဂျာဒေးဗစ် ရေးသားသော ယူနန်ပြည်စာအုပ်တွင် ယူနန်သည် သျှမ်းဝေါဟာရ ဖြစ်ကြောင်း ယူနန်-နေထိုင်သည်၊ နမ်-များပြားခြင်း။ ထို့ကြောင့် ယူနန်များပြား ကျယ်ပြန့်စွာနေထိုင်သော လူမျိုးတို့နေရာ၊ ပြည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် ထိုလူမျိုးတို့သည် အနောက်ဖက် အာသံသို့တိုင်အောင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း (၁၃)ရာစုတွင် အာသံကုို သိမ်းပိုက်ပြီး အာဟုမ္မမင်းဆက် ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း အာဟုမ္မပူရံဂျီခေါ် အဟုမ္မသမိုင်း တွင်ရေးသားထားသည်။ ယနေ့တရုတ်ပြည် ယူနန်နယ်တွင် နေထိုင်ကြပြီး “နမ့်မောမြစ်ကို” အမှီပြု၍နေထိုင် “သျှမ်းများကို မောသျှမ်း” ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။
မောသျှမ်း(ခ)တိုင်းမော သုံးစွဲသော ဗျည်းအက္ခရာ အနာဂတ်သျှမ်းလူငယ်များ မိမိအမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရင် အချင်းချင်း ရိုင်းပင်ကူညီ လက်တွဲလုပ်ကိုင် နိုင်ကြပါစေ။
*သျှမ်းကြီး (ခ) တိုင်းလုံ (ခ) တိုင်းယိုင်
November 13, 2013 at 4:33pm
သျှမ်းကြီးတို့သည် သျှမ်းပြည်နယ် အနှံ့အပြားတွင် လည်းကောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ် တို့တွင် လည်းကောင်း နေထိုင်ကြသည်။ သို့သော် သျှမ်းကြာ ဗမာဖြစ် ဆို့သည့်အတိုင်း သျှမ်းများသည် ဗမာ ဖြစ်ကုန်ကြသည်လဲ ရှိသည်။ သျှမ်းကြီးတို့သည် “အိုက်လောဝ် Ai-Lao” တို့ဖြစ်ကြပြီး လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ခန့်က တရုတ်တို့ကို စစ်ရှုံးပြီး သံလွင်မြစ်၊ ဧရာဝတီမြစ်အတိုင်း စုန်ဆင်းလာခဲ့သူများ ဖြစ်သည်။ နန်ချောင် ခေတ်တွင် သျှမ်းကြီးတို့သည် မိန်းမင်းဆက် (Mong Dynasty) များဖြစ်ကြပြီး နန်ချောင် ထီးနန်းကို စိုက်ထူခဲ့ကြ သူများဖြစ်သည်။ လုံနိုင်ငံတော်မှ လာသော သျှမ်းများ ဖြစ်သဖြင့် တိုင်းလုံ (သျှမ်းကြီး) ဟုခေါ်သည်။ “လုံ ” သည် သျှမ်းစကားတွင် ကြီးသည် ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ “ယိုင်” သည်လဲ ကြီးသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသဖြင့် သျှမ်းကြီးကို “တိုင်းယိုင်” ဟုလဲခေါ်သည်။ ၎င်းတိုင်းလုံတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာသက်ဝင် ယုံကြည်ကြသူများဖြစ်သည်။
သျှမ်းကြီး (ခ) တိုင်းလုံတို့ သုံးစွဲသော ဗျည်းအက္ခရာ အနာဂတ်သျှမ်းလူမယ်များ မိမိအမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရင် အချင်းချင်း ရိုင်းပင်ကူညီ လက်တွဲလုပ်ကိုင် နိုင်ကြပါစေ။
ချစ်သော စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအား အစဉ်သဖြင့် လေးစားလျှက် "۩" http://shanniyouth.blogspot.com/2010/03/blog-post_4000.html
November 13, 2013 at 4:37pm
အာသံသျှမ်းများ (သို့) တိုင်းအာဆန် ကုန်းဘောင် ရာဇ၀င်အရ ရွှေလီမြစ်အထက်၊ လက်ယာဘက်ကမ်းရှိ (မှု- အန်- မော) မိုင်းမောဝ် နယ်တွင် ထီးနန်းစိုးစံသော စော်ဘွားများမှစ၍ သျှမ်းပြည်ထောင်စုများပျံ့ ပွားခဲ့သည်။ ထိုပြည်ထောင်စု အားလုံးကို မိုင်းမေ၀် ပြည်ထောင်စု ခေါ်တွင်သည်ဟု သိရသည။် မေဂျာဒေးဗစ် ရေးသားသော ယူနန်ပြည်စာအုပ်တွင် ယူနန်သည် သျှမ်းဝေါဟာရ ဖြစ်ကြောင်း ယူနန်-နေထိုင်သည်၊ နမ်-များပြားခြင်း။ ထို့ကြောင့် ယူနန်များပြား ကျယ်ပြန့်စွာနေထိုင်သော လူမျိုးတို့နေရာ၊ ပြည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် ထိုလူမျိုးတို့သည် အနောက်ဖက် အာသံသို့တိုင်အောင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း (၁၃)ရာစုတွင် အာသံကုို သိမ်းပိုက်ပြီး “အာဟုမ္မမင်း”ဆက် ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း အာဟုမ္မပူရံဂျီခေါ် အဟုမ္မသမိုင်း တွင်ရေးသားထားသည်။ ၎င်း “အာဟုမ္မမင်း”ဆက် ”တည်ထောင်စဉ် သွားရောက်နေထိုင်ကြသော သျှမ်းကို “အာသံသျှမ်း” သို့မဟုတ် “တိုင်းအာဆန်”ဟုခေါ်သည်။
အာသံသျှမ်း(ခ) တိုင်းအာဟုမ် တို့သုံးစွဲသော ဗျည်းအက္ခရာ အနာဂတ်သျှမ်းလူငယ်များ မိမိအမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရင် အချင်းချင်း ရိုင်းပင်ကူညီ လက်တွဲလုပ်ကိုင် နိုင်ကြပါစေ။ တိုင်းဖှါကေး (တိုင်းအာဆန်)၊အာသံသျှမ်းများဆင်တက်လါပုံ
November 13, 2013 at 4:39pm
Ã ခန္တီးသျှမ်း (တိုင်းခန္တီး) မြန်မာအစ -တကောင်းက ဟုဆိုရာ၌ တကောင်းသည် သျှမ်းဘာသာစကားဖြစ် သည်။ တာ-ဆိပ်ကမ်း ၊ ကောင်း - အစုအပုံ ဖြစ်၍ “စုပုံသည်” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ဧရာဝတီမြစ်သို့ ရောက်ရှိဆင်းသက်ပြီး “အစုလုက်အပုံလိုက် နေထိုင်ရာဆိပ်ကမ်း” ဟု ဆိုလုိရင်းဖြစ်သည်။ တကောင်းသည် သျှမ်းတို့ မှည့်ခေါ်ခဲ့သောအမည်၊ သျှမ်းတို့စတင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး သျှမ်းတို့ တည်ခဲ့သောမြို့ဖြစ်သည်။ တကောင်သို့ “သာကီဝင်မင်းမျိုး အဘိရာဇာ” မရောက်မီကပင် သျှမ်းတို့ရောက်ရှိ နေထိုင်ပြီးဖြစ်သည်။
ဟူးကောင်းလွင်ပြင်ဒေသသည်-“ပတ်ကွိုင်တောင်”တန်းကြီးနှင့် ရိုးမ တောင်တန်းများ ၀န်းရံလျက် ရှိသည်။ မြောက်ဘက်တွင် ခေါ် တိဘက်၊ အရှေ့ ဘက်တွင် နန်ချောင်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် မာဂဓသေဒတို့ ပေါက်ရောက်နိုင်သည်။ ခေါ်သလ္လာဝတီမြစ်နှင့် ခေါ် ဧရာဝတီမြစ်ဖျားခံရာနေရာလည်းဖြစ် သည်။ AD -9 ရာစုတွင် ဟူးကောင်းလွင်ပြင်၌ မုံးနေသျှမ်း များရောက်ရှိနေ ကြပြီးဖြစ်သည် ဟုမှတ်တမ်းများ၌ဖော်ပြသည်။ သျှမ်းတို့သည် ခရစ်မပေါ်မီကပင် “ဝေသာ လီ၊ ဆာဒီယ၊ တိဘက်”သို့ ရောက်ပြီးဖြစ်သဖြင့် ထိုကာလနှင့် တစ်ချိန်တည်း၌ပင် ဟူးကောင်းလွင်သို့ရောက်ရှိလာကြပေသည်။ AD -13 ရာစုတွင် “မုံးစေခွန်သျှမ်းများ ရောက်ရှိလာပြီး မုံးနေသျှမ်းများနှင့် ပေါင်းမိကာ ခန္တီးသျှမ်းခေါ် ခန္တီးဒေသနေသျှမ်း” ဖြစ်လာသည်ဟု မှတ်တမ်းများကဆိုသည်။ ဟူးကောင်းလွင်ပြင်ဒေသမှ ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး အချို့မှာ လတ္တီတွဒ် ၂၆ံ၃၆” နှင့် လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ံ၃၀” ကြား၊ ဟူးကောင်းတောင်ကြားရှိ နိမ်ပြင် (Neng Pyin ) ဒေသတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သူများလည်းရှိသည်။ အချို့မှာ တောင်ဘက် ပယင်းတွင်းရှိရာ သို့ရောက်ရှိပြီး၊ အချို့မှာ ကင်းတော်၊ တာရိုး နှင့် ခန္တီး (ယခု ခန္တီး)သို့ ရောက်ရှိသွားကြသည်။ ဟူးကောင်းလွင်ပြင်ရှိ သျှမ်းနိုင်ငံတော်ကြီးသည် AD -649 တွင် အရှေ့ဘက် နန် ချိုသျှမ်းနိုင်ငံတော်ကြီး၏ သျှမ်းပြည်ထောင်စု (6) ခုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည် နန်ချို ဧရာဇ် ခွန်လူဖုန်း (AD -753 – 763 ) သည် တိုင်းခမ်း လှည့်လည်ရင်း ဟူးကောင်းလွင်ပြင်သို့ ရောက်ရှိစဉ်ပ ဆား၊ ရွှေ၊ ပယင်း၊ ကျောက်စိမ်းရတနာများ ထွက်ရှိသည့် ခန္တီးဒေသကို နိုင်ငံ တော်ဘဏ္ဍာမြေအဖြစ် စောင့်ရှောက်ရန် ပူတာအို တွင်တပ်စခန်းချ၍ စီစဉ်ခဲ့သည်။ AD -1311 မိုင်းမောဝ် ခေတ်တွင်လည်း မိုင်းမောဝ် သျှမ်းပြည်ထောင်စု ဧကရာဇ် နိုင်ငံတော်ကြီး တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ မိုးကောင်း (Mo Gaung မိုးညှင်း ( Moh Nyin ) တို့မှတဆင့် အခွန်ဘဏ္ဍာဆက် နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ တိုင်းခန္တီး၊ တိုင်းလျှဲန် ”တို့သည် မိမိ၏ဘုရင်(စ၀်ဖှလုံ) များဖြင့် ပြည့်စုံခိုင်မာသော သျှမ်းလူမျိုးများ အဖြစ် အရှည်သဖြင့် ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းခန္တီး၊ တိုင်လျှဲန် တို့သည် နန်ချိုဟုခေါ်သော သျှမ်းဧကရာဇ်နိုင်ငံကြီးမှ ရှစ်ရာစုဝန်းကျင်က ယခုနေထိုင်ရာဒေသသို့ “နန်ချိုမှ” ထပ်မံအင်အားဖြည့်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ နန်ချိုသျှမ်း ဧကရာဇ်နိုင်ငံတော်ကြီး သည်ယခုအာသံခေါ် “အဟွမ်နိုင်ငံ”ထိရောက်အောင် ကျယ်ပြန့်ကြီးမားခဲ့သည်။ Dorathy Woodman, Trager, တို့၏မှတ်တမ်း စာအုပ်အရလည်းကောင်း၊ တရုတ်မှတ်တမ်း၊ သျှမ်းမှတ်တမ်း (မွန်ဂိုမင်းမှတ်တမ်း)အရ လည်းကောင်း၊ နန်ချို သျှမ်းအင်ပါရာကြီးသည် လောနိုင်ငံ၊ ချိမ်းမိုင်၊ မော်လမြိုင်၊ ဧရာဝတီ၊ အာသံ၊ ဟူးကောင်းဒေသ တို့ကို စုစည်းပေါင်းစပ်၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းပါရှိသည်။ သျှမ်းနီများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ သက်ဝင်ယုံကြည်ကြသူများဖြစ်သည်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (2)တွင် “စကုဒေသ”သည် AD 1120 မှစ၍ ခန္တီးသျှမ်းတို့ နေထိုင်ရာဒေသ ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်း ၏ ခေတ်ဟောင်းမြန်မာရာဇ၀င်တွင် ပုဂံကျောက်စာများ၌ “ခန္တီး”ဟူသော ဝေါဟာရကို အကြိမ် (20)ထက်မနည်း တွေ့ရှိရကြောင်း ဖော်ပြထားသည်၊၎င်းခန္တီးသျှမ်းများသည်လည်း အခြားသျှမ်းနီးတူ ဗုဒ္ဓဘာသာ သက်ဝင်ယုံကြည်ကြ သူများဖြစ်သည်။ ခန္တီးဒေသမှ ကြိမ်ဘုရားစေတီ Â
ခန္တီးသျှမ်း(သို့မဟုတ်)တိုင်းခမ်းတီး ဟူသော ဝေါ်ဟာရမှာ ခမ်း သည် သျှမ်းဘာသာ ( ရွှေ )တီး သည် သျှမ်းဘာသာ ( နေရာ ) ထို့ကြောင့် (ရွှေနေရာ မှာ နေထိုင်သော သျှမ်း) များဟု အဓိပါပ္ပါယ်ရပါသည်။၎င်း ခန္တီး၊ သျှမ်းနီ ကဒူး၊ ကဏန်းတို့ ရှေးယခင်က သျှမ်းဘောင်းဘီကို ၀တ်ဆင် ခဲ့ကြသော်လည်း အင်းဝ သျှမ်းခေတ်မှ စ၍ စစ်တိုက်ထွက်လျှင် သျှမ်းဘောင်းဘီရှည် ၀တ်ဆင်၍ နန်းတွင်းနှင့် အိမ်တွင် နေသောအခါ နန်းဝတ် နန်းစားအဖြစ် တောင်ရှည်ပုဆိုးကို အသုံးပြုလာခဲ့မှ ယနေ့တိုင်ဝတ်ဆင် နေကြသည်ဟုသိရသည်။
ကလေးမြို့ (သျှမ်းအခေါ် ကာလေမြို့)ကလေးမြို့ကို ချင်းတွင်းမြစ် အနောက် မိုင် ၂၀ (၃၂.၁၈၆၈ ကီလိုမီတာ) သျှမ်းတွေက “ကာလေ” (ကလေး) အမည်ရှိတဲ့ မြို့ကြီး တမြို့ ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ တရုတ်က ကျိယလီ လို့ခေါ်ပါသည်။ မြို့ ရိုးနှစ်ထပ် ”နဲ့ ကျုံးကို အခုထိ တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်၊ ဒီမြို့ကို မြန်မာတွက AD- 1370 လောက်ကပဲ ရေးမှတ်ထားပါတယ်။ တရုတ်ကလည်း AD-1406-7 ကစပြီး ကလေးရဲ့ မိုးညှင်း (Meng-Yang) စစ်၊ မြန်မာ ( Mientien ) စစ်ကြောင်းတွေ ရေးထားကြောင်းသိရှိရသည်။ ဒေါက်တာ သန်းထွန်းရဲ့ ဘာသာဗေဒခရီး (ဒီဇင်ဘာ ၁၉၅၄) ခန္တီးသျှမ်းများ အသုံးစွဲသောစာ
တီꨳꨓ်ꨮးꨁွမ်းꨅဝ်ꨳꨀဝ်ꨲ ꨟꨮ်ꨳပေꨣးꨟꨓ်ꨟꨤင်ꨳ Android apk ꨟꨤင်ꨳ Icon မꨓ်းꨓꨓ်ꨵ ꨅ်ꨮꨵSoftware ꨡꨓ်ꨓꨯꨵꨬလꨳ
မ်ꨮꨲသုင် ပီꨳꨓွင်ꨵꨟဝ်းꨁဝ် ꨅိူဝ်းမꨣးꨡꨰဝ်ꨲꨟွတ်ꨳဝꨰပ်ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ်ꨲꨓꨯꨵတင်းသꨱင်ꨳ
မိူဝ်ꨳꨓꨯꨵ တေမꨣးမွꨀ်ꨲလꨤတ်ꨳꨬꨓပꨓ် လꨯꨤးꨟꨮ်ꨳတီꨳꨓ်ꨮးꨁွမ်းꨟဝ်းꨟꨓ်လꨯꨳꨟꨤင်ꨳIcon Android apk ꨓꨯယဝ်ꨵ
တီꨳꨓ်ꨮးꨁွမ်းꨟဝ်း ပေꨣးဝꨣꨳꨟဝ်းꨡဝ် သေꨣꨵဝွꨯးꨕူင်း (Androkd apk)သ်ꨮꨲဝꨯꨵတီꨳꨓ်ꨮးꨁွမ်းꨟဝ်းꨓꨯ
မꨓ်းတေꨡမ်ꨲꨟꨓ်ꨟꨤင်ꨳမꨓ်း၊ ပေꨣးꨡမ်ꨲꨟꨓ်ꨟꨤင်ꨳမꨓ်းမꨓ်း ꨓင်ꨲꨡꨓ်ꨟဝ်းလူဝ်ꨲꨓꨓ်ꨵ
တေꨟꨣယꨤပ်ꨲဝꨯꨵꨡိတ်းꨓိုင်ꨳ၊ ယွꨓ်ꨵꨓꨓ်ꨬလ ꨳ ꨓင်ꨲꨟိုဝ်ပေꨣးတေꨟꨓ်ꨟꨤင်ꨳမꨓ်းသေ
ꨟꨮ်ꨳပေꨣးꨟꨣငꨯꨤꨳꨓꨓ်ꨵ ꨅ်ꨮꨵသေꨣꨵꨵ ဝꨯွး ꨡꨓ်ꨕူꨳတꨰမ်ꨳပꨓ်ဝꨯꨵတီꨳတ်ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ။
ဝꨯꨤးသꨮꨤင်းSoftware ယဝ်ꨵ၊ ꨟꨓ်ꨟꨤင်ꨳꨓင်ꨲꨓꨯယဝ်ꨵ။
ပေꨣးဝꨣꨳလိတ်ꨳWin RaR ယဝ်ꨵꨅိုင် ꨓꨱꨀ်းတီꨳ muzhiwan by www.tainum.com ꨓꨓ်ꨵသွင်ꨀမ်းတꨣꨵ
November 13, 2013 at 4:43pm
ဂုရုရာဇ်တိုင်း” (စည်းခမ်း) ပြည်ရှင် ဥတ္တရစောဖြူမင်း၏ သားတော် စောဝ်ဆေးဖိတ် ထမံသီ အတတ်ပညာဖြင့် ကျားဖြူအဖြစ်သို့ ပြောင်း၍ မိုင်းသုံစခန်း ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျက်စားလျက် ရှိလေသည်။ စောဝ်ဆေးဖိတ်ခေါ် (ကျားဖြူ) မင်းသားသည် ဧရာဝတီမြစ်သို့ ရေသောက်ရန် ဆင်းလာသည်။ (အေဒီ-၆၄၉ တွင်တည်သော မောရှမ်းနန်းစော (နန်ချို)နိုင်ငံသည်၊ (၁၁-ရာစု၌ ဘုရင် ဥတည်မင်း၏ သမီးတော် စောလှမယ် (ခေါ်နန်းမွန်) နှင့်ပေါင်းဖက်၍ သားတော် သုံးပါးဖွားမြင် လေသည်။ သားတော်ခွန်ကံ (ခေါ်)ဆေးကော်ဖ၊ ခွန်ရံ(ခေါ်) ဆေးတုံဖ၊ ခွန်အွန် (ခေါ်)ဆေးကျံဖ(တစ်နည်း-၀န်းသို သမိုင်းအရ တွင်လည်း “သိုကော်ဘွား၊ သိုငံဘွား၊ သိုကြည်ဘွား၊ သိုဟုံဘွား” ) တို့ကိုဖွားမြင် ထွန်းကားလေသည်။ နောင်တွင် ဘိုးတော် ဥတည်မင်း ပေးအပ်သည့် အမွေပစ္စည်း (ဓါး၊ အိုးစည်း၊ ဆင်)တို့ကို အသီးသီးရယူကာ အလိုအလျောက် ဓါးစိုက်သောနေရာ၊ တစ်ဘတ်ပိတ်စည် မည်သောနေရာ၊ ဆင်းဦး ကင်းတပ်တွင် ဗျိုင်းနားသောနေရာ၊ တို့၌ ထီးနန်း အသီးသီးစိုက်ထူကြ၏။ “မိုးမိတ် (မိန်းမစ်) ဓါးမြှောင်မြို့- ကမောဇတိုင်း၊ မိုးကောင်း(မိန်းကောင်) အိုးစည်မြို့-ရဌတိုင်း၊ မိုးညှင်း(မိန်းယမ်း) ဗျိုင်းမြို့ -အာရပူရတိုင်း၊ ၀န်းသို (ကြိုင်းဆေး) ကျားကွင်းမြို့- စိနဌတိုင်း ဟူသော သျှမ်း(၄) မြို့ ကို သက္ကရာဇ် (၃၀၀၊ ၃၀၁၊ ၃၀၂၊ ၃၀၃)ခုနှစ်” တွင်အသီးသီး တည်တော်မှုခဲ့လေသည်။ အေဒီ(၁၁)ရာစုနှင့် သာသနာ သက္ကရာဇ်(၃၆၀)တို့ကွာလွန်း သဖြင့် ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ ထိုမြို့ ၄ မြို့တို့မှဆင်းတက် ပေါက်ဖွားလာသော သျှမ်းများသာဖြစ်သည်။ ရာဇ၀င်မှတ်တမ်းများ၌ တွေ့ရသော သိုဟန်ဘွားမင်းစော (ဆိုခန်ဖှ)သည် တစ်ဦးတည်း မဟုတ်ဘဲ နာမည်တူများ (ဆိုမိသားစု မင်းမျိုးနွယ်စုဝင်များ) ဖြစ်ကြပြီး၊ သက္ကရာဇ်ကာလအားဖြင့် ကွဲပြား၏။ နန်ချို သျှမ်းဧကရာဇ်မင်းဆက် (AD 650-1252 ) နှောင်း၌တစ်ဦး၊ မောသျှမ်းတိုင်းပြည် စယ်လန့် ဧကရာဇ်မင်းဆက် (AD 1300-1772 )” ၌တစ်ဦး၊ မိုးညှင်းမင်းတရားကြီး စ၀်စောလုံ၏သား အာဝနန်းရှင် “သိုဟန်ဘွား (ဆေခန်ဖှ) (AD 1505-1547 )” ကတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အားလုံးသည် “ဆို” မင်းနွယ်ဝင်များမှ ဖြစ်ကြပါသည်။
ဟိုရင်ချိန်က မိုးမိတ်ဟော်နန်း ကတုးသျှမ်း (တိုင်းကတူး)၊ ကနန်းသျှမ်း(တိုင်းကနန်း) တို့သည်လည်း၊ မုိုးညှင်း၊ မုိုးကောင်း၊ မုိုးမိတ် သျှမ်းညီနှောင့် သုံးဦး၏ နန်းမြို့တည် ရာဇာဝင်အရသော် လည်းကောင်း (AD 650-1252 ) စ၀်ဆမ်လုံနုင့် အတူပါလာသော ထပ်မံအင်အားဖြည့် စယ်လန့်သျှမ်းများ လည်း ဖြစ်ပါသည်။ “တိုင်းခမ်းတီ၊ တိုင်းလျှဲန်၊ တိုင်းကတူး၊ တိုင်းကနန်းတို့သည် မောသျှမ်းတိုင်းနေ အုပ်စုကြီးမှ သျှမ်းများသာဖြစ်ပါသည်။ မိုးကောင်း၊ မိုးညှင်း၊ ကောလင်း၊ ၀န်းသို၊ ဟုမ္မလင်း၊ ခန္တီးသျှမ်း တိုင်းလျှဲန်(သျှမ်းနီ) သျှမ်းတို့၏ ဘုရင် စ၀်ဖှ များအားလုံးသည်(ဆို) မိသားစုဝင် မင်းမျိုးများသာ ဖြစ်ကြသည်ဟု မှတ်တမ်း များ၌အခိုင်မာ ဆိုထားပါသည်”။ ၎င်းသျှမ်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း တစ်လျှောက်တွင် မြန်မာမင်းပြည်ထောင် များနှင့် ထီးပြိုင်နန်းပြိုင် မင်းပြည်ထောင်များ အဖြစ်လည်းကောင်း မြန်မာမင်းများ တန်ခိုးသြဇာ လွမ်းမိုးသောအခါ လက်အောက်ခံ မင်းပြည်ထောင်များ နှင့်အတူ ပူးပေါင်း ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း ဖြစ်ပေါ် ရေးကို ရှေးဦး မဆွကပင် ပါဝင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသော သျှမ်း များသာဖြစ်သည်။ “သျှမ်းကြာဗမာဖြစ် ဆိုရိုးစကားအရ ဗမာဖြစ်ကုန်သည် လည်းရှိသည်။ မြန်မာဆန်သော သျှမ်းများဖြစ်၍ သျှမ်းဗာဟုခေါ်ဆိုကြောင်း မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတွင် စင်စစ်သောကါ သျှမ်းများသာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖေါ်ပြထားသည်”။ တိုင်းလျဲန်ဟူသော သျှမ်းစကားကို မြန်မာစကားဖြင့် တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုပါက သျှမ်းနီ အဓိပ္မါယ်ရရှိပါသည်။ သျှမ်းနီဟူသော လူမျိုးအမည်ကို တိုင်းလျဲန်လူမျိုးများက သဘောရိုးဖြင့် လက်ခံသော်လည်း၊ တပ်မတော်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဌာနများအတွက် အသုံးပြုရန် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော ဦးစီးတာဝန် (၁၉၉၇) စာအုပ် စာမျက်နှာ ၃-၃၈ တွင် သောင်းကျန်းသူများ စာရင်းဖေါ်ပြရာ၌ သျှမ်းနီဆိုသည်မှာ သျှမ်းသောင်းကျန်းသူ (SSPP) Shan State Progress Parth- သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေး ပါတီ ဟုဖေါ်ပြထားသဖြင့် သျှမ်းနီလူမျိုး အမည်သည် သံသယနှင့် အထင်လွဲမှားမူများ ဖြစ်စေပါသည်။ သျှမ်းနီ ဟူသော ဝေါ်ဟာရမှာ အချို့သျှမ်းသမိုင်း ပညာရှင်များက (နမ့်မယ်လျဲန်မြစ်) သျှမ်းဘာသာ (မြစ်နီ) ကို အစွဲပြု၍ နေထိုင်လာခြင်း ကြောင့်၎င်း အချို့ပညာရှင်များက စစ်တအားတိုက်၍ ( နီရဲသော သတ္တိနှင့် ပြည်စုံခြင်း ) တို့ ကြောင့်၎င်း တိုင်းလျဲန် သို့ သျှမ်းနီ ဟုခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုအခြေခံသော ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများရှိကြ၍ ၀ါဝင် ၀ါထွက်၊ သီတင်းကျွတ်ပွဲ၊ ရှင်ပြုပွဲ၊ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ထိမ်းမြားမင်္ဂလါနှင့် အသုဘမှအစ မြန်မာလူမျိုးများနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှု များရှိသည်။ သို့ရာတွင် တနှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် မြို့အရှင်ကြီး၊ ရွာအရှင်ကြီး များအား ပူဇော်ပသရာတွင် ရွက်ဆိုသော မြို့ရွာ အရှင်ကြီး များ၏ အမည်မှာ ထိုဒေသ၏ ရှေးဟောင်း သျှမ်းအကြီး အကဲများ၏ အမည်များသာ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သျှမ်းကြာ ဗမာဖြစ်ဆုိုသည် ဆုိုရုိုးအတုိုင်း ဗမာဖြစ်သွားကြသည်ကလဲ များပါသည်။
အင်းတော်ကြီးနယ် တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ၌ ထုထည် အကြီးဆုံးဟု မှတ်တမ်းတင် နိုင်တော့မည့် လန့်ဆေးခမ်း ဘွဲ့တော် အမည် ရှိသော ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော် မြတ်ကြီး တစ်ဆူ (၂ဝဝ၉) ခုနှစ်အတွင်း သွန်းထု ပြီးစီး ခဲ့ရသည်။ ဓါတ်ပုံ သက်နိုင်ထွန်း (နဘား)Â သျှမ်းနီ လူမျိုး များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ သက်ဝင်ယုံကြည် ကြသူများဖြစ်သည်။ ၎င်း ခန္တီး၊ သျှမ်းနီ ကဒူး၊ ကဏန်းတို့ ရှေးယခင်က သျှမ်းဘောင်းဘီကို ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြသော်လည်း သျှမ်းခေတ် ကြီးများဖြစ်သော “မြင်စိုင်း၊ ပင်းယနှင့်” အထူးသဖြင့် သျှမ်းနီစ၀်ဖှါ့များဖြစ်သော “အင်းဝ သျှမ်းခေတ်”မှ အ၀နန်းသျှင် မင်းတရားကြီး မှစ၍ စစ်တိုက်ထွက်လျှင် သျှမ်းဘောင်းဘီရှည် ၀တ်ဆင်၍ နန်းတွင်း၊ အိမ်တွင်းနေသောအခါ “နန်းဝတ် နန်းစား” အဖြစ် တောင်ရှည် ပုဆိုးကို အသုံးပြုလာခဲ့မှ ယနေ့တိုင်ဝတ်ဆင် နေကြသည်ဟုသိရသည်။ ၎င်းသျှမ်းနီ ကတူး၊ ကဏန်း ခန္တီးသျှမ်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ သက်ဝင်ယုံကြည် ကြသူများဖြစ်သည်။
Ãဓါးတိုင်းကနေသော သျှမ်းနီများ စိုင်းဆန်အိုက်ရေး ဆိုမိသားစုနှင့် စိုင်းထိန်လင်းရေး အထက်မြန်မာပြည် ရှေးဟောင်း သျှမ်းဒေသများမှ ထုတ်နှတ် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ သျှမ်းနီလူမျိုးများ အသုံးပြုသော အက္ခရာ
November 13, 2013 at 4:44pm
ဆစ်ဆောင်ပန်းနားသျှမ်း (ခ) တိုင်းလူး “ဆစ်ဆောင်ပန်းနား” ဒေသသည် တောင်ဘက်တွင် သျှမ်းပြည်နယ် (မြန်မာ)၊ အရှေ့ဘက်တွင် လောနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် ယူနန်နယ်နှင့် စပ်လှက်ရှိပြီး တရုတ်ပြည်၏ တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသည်။ ဆစ်ဆောင်ပန်းနား ဒေသတွင် နေထိုင်သော သျှမ်းများကို တိုင်းလူး (လူးသျှမ်း) ဟုခေါ်သည်။ ဆစ်ဆောင်ပန်းနားသည် လူးသျှမ်းတို့၏ တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီး “ဆယ်နှစ်ပြည်ထောင်တိုင်းပြည်” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထိုကဲသို့ ဆယ်နှစ်ပြည်ထောင် အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်သည် ရှေးခေတ် သျှမ်းလူမျိုးတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်ရှိ သျှမ်းတို့သည်လဲ အေဒီ ၉၅၇ ခုတွင် ကမ္ဘောဒီးယားမှ “တိုင်းခိုရတ်” (ခိုရတ်သျှမ်း) တို့ထံမှ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ကိုယူ၍ (၁၂) ပြည်ထောင်စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်လာခဲ့ကြသည်။ ဘုရင့်နောင်လက်ထက်သို့ ရောက်သောအခါ (၉) ပြည်ထောင်စနစ်ဖြင့် တိုင်းပြည်ကို စီမခန့်ခွဲသည်ကို တွေ့ရသည်။ မဲခေါင်မြစ် အနောက်ဘက်တွင် (၁၂) မြို့၊ အရှေ့ဘက်တွင် (၁) မြို့ရှိသည်။ “ဆစ်ဆောင်” သည် (၁၂) ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ငါးမြိုမှ ဆယ်မြို့ ရှိသောဒေသကို “တစ်ပန်းနား" ဟုခေါ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် “ပန်း” သည် ရှစ်ဆယ်ဖြစ်ပြီး “နား”သည် လယ် ဖြစ်သည်။တိုင်းလူးများကို တရုတ်တို့က “ပါးယီ” (Pa Yi) ဟုခေါ်သည်။ လူးသျှမ်းများသည် ကျိုင်းတုံဒေသ၊ လမ်းပွန်ဒေသ၊ ကျိုန်းဟိုင်းဒေသ၊ လောနိုင်ငံအတွင်းပိုင်း နမ့်ဦးဒေသ၊ လောနိုင်ငံရှိ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်း တစ်လျှောက်မှ စီထန်ထရွန် (Si Tan Dorn) ကျွန်းစုလေးထောင် အထိနေထိုင်ကြသည်။ အေဒီ ၁၉၁၈ ခုတွင် တရုတ်ပြည်အတွင်၌ လူးရှမ်းဦးရေ ၃၅၀,၀၀၀ ဦး၊ ကျိုင်းတုံဒေသတွင် ၅၀၀,၀၀၀ ဦး၊ လောနိုင်ငံနှင့် “ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၇၅၀,၀၀၀” ဦး ရှိသည်။ ဆစ်ဆောင်ပန်းနား၏ မြို့တော်သည် “ကျိုင်းဟုန်” (Chieng Rung = “အာရုံဦးမြို့တော်) ဖြစ်သည်။ ဆစ်ဆောင်ပန်းနားဒေသသည် မူလက မြန်မာပြည်ရှိ သျှမ်းလူမျိုးများနှင့် အတူရှိခဲ့ပြီး အေဒီ ၁၈၇၄ ခုတွင် ကျိုင်းတုံစော်ဘွားနှင့် မြန်မာဘုရင်တပ်များက သွားရောက်တိုက်ခိုက်သဖြင့် လူးသျှမ်းများက တရုတ်တို့ကို အကူအညီတောင်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်တို့နှင့်သာ အဆက်အသွယ် များခဲ့သည်။ အေဒီ ၁၈၉၂ ခုတွင် အင်္ဂလိပ်တို့က ဆစ်ဆောင်ပန်းနားဒေသကို တရုတ်ပြည်သို့ ခွဲပေးခဲ့သည်။ လူးသျှမ်းတို့၏ သမိုင်းဝင်မြိုတော်များက သုံးမြို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျိုင်းတုံ (မြန်မာ)၊ မိန်းလျဲန်း (တရုတ်)၊ ကျိုင်းဟုန့် (တရုတ်) တို့ဖြစ်သည်။ လူးသျှမ်းများသည် အေဒီ ၁၃ ရာစုတွင် ကျိုင်းတုံမှ တဆင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ (ထေရဝါဒ) ကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်။ နတ်ကိုးကွယ်သူ တချို့လည်း ရှိနေသေးသည်။ နှစ်သစ်ရောက်လျှင် ဝက်ဖြင့်နတ်ကို ပူဇော်ကြသည်ကို တွေရသည်။ လူးသျှမ်းများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ သက်ဝင်ယုံကြည်ကြသူများဖြစ်သည်။
လူးသျှမ်းများ သုံးစွဲသော ဗျည်းအက္ခရာ *အနာဂတ်သျှမ်းလူမယ်များ မိမိအမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရင် အချင်းချင်း ရိုင်းပင်ကူညီ လက်တွဲလုပ်ကိုင် နိုင်ကြပါစေ။ ချစ်သော စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအား အစဉ်သဖြင့် လေးစားလျှက်
November 13, 2013 at 4:48pm
သျှမ်းလူမျိုးတို့မှာ နန်ကျောက်၊ နန်ချောင်၊ (နန်ကျောင်းဟုလည်း အရေးအသားရှိသည်) မွန်ဂိုရိုက် အနွယ်ဝင် (သျှမ်း-တိုင်း)များ ဖြစ်သည်။ အေဒီ ၉ရာစုအစဦးတွင် တရုတ်ထန်မင်း ဆက်၏ တန်းခိုးထွား လာမှု အောက်တွင် “နန်ကျောက်ပြည်ကြီး (ယခုယူနန်ပြည်နယ်၊ တာလီဒေသ)” ပြိုလဲပြီး အင်အားနည်းပါ သွားခဲ့ရသည်။ သို့သော် အလုံးစုံပျက်စီး သွားသည်ဟု မဆိုနိုင်ဘဲ ထန်မင်းဆက်ကုန်၍ စုန်မင်းဆက် လက်ထက်ထိတိုင် ရပ်တည်နေ နိုင်ခဲ့သေးသည်။ တရုတ်ပြည်ကို မွန်ဂို(တာတာ)တို့က ၁၁-ရာစုတွင် သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး နယ်ပယ်များ ဆက်လက်ချဲ့ထွင်ခဲ့ရာ ၄င်း “သျှမ်း-တိုင်း” တို့ကိုလည်း အလွတ်မပေးခဲ့ချေ။ ထိုသို့ မွန်ဂိုတို့ရန်ကြောင့် လူမျိုးစုကြီးပြိုကွဲသည့် ရလာဒ်အဖြစ် တောင်ဖက်တစ်လျှောက် စုန်ဆင်းအခြေချခဲ့ရာမှ သျှမ်းလူမျိုးအဖြစ် ပေါ်ထွက် လာကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ယခုသျှမ်းပြည်နယ်မှ သျှမ်းလူမျိုးများ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လာအိုနိုင်ငံတွင် လော(မှုန်း) လူမျိုးများ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထိုင်း လူမျိုးများအဖြစ် လည်းကောင်း ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သျှမ်းလူမျိုးများမှာလည်း ကချင်လူမျိုးများကဲ့သို့ပင် တောတောင် ထူထပ်သည့်ဒေသတွင် အခြေချခဲ့ကြသည့် သူများလဲ ရှိခဲ့သည့်အတွက် လူမျိုးစုငယ် အများအပြား ကွဲပြားခဲ့ပြီး ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားတို့ပါ အနည်းငယ်စီ ကွဲပြားကြသည်။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံ သျှမ်းလူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာပြီးလျှင် ဒုတိယအများဆုံး လူမျိုးစု ဖြစ်သည်။ သျှမ်းပြည်နယ်တွင် ၄ သန်းကျော် နေထိုင်ပြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၇ သိန်းကျော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် ၁၀ သိန်းကျော်နှင့် အခြားတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များတွင်လည်း ပျံ့နှံ့စွာ နေထိုင်၍ လူမျိုးစု ၃၅ စုပါဝင်နေထိုင်သည်။ သျှမ်းအမျိုးသားများသည် ပင်နီရင်စေ့ တိုက်ပုံကို ခပ်ပွပွဘောင်းဘီရှည်နှင့် တွဲဖက်ဝင် ဆင်ပြီး ခါးတွင် ပုဝါစစည်းနှောင်းလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ကော်လာမဲ့ ရင်ဖုံးလက်ရှည်အင်္ကျီကိုပတ် လည်စင်းပါသော ရိုးရာလုံချည်နှင့် တွဲဖက်ဝင်ဆင်သည်။ ဇမ္ဗူတံဆိပ်ကျမ်း သျှမ်းလူမျိုးများ
ဇမ္ဗူတံဆိပ် ကျမ်းရင်းတွင် ဖော်ပြချက်အရ လင်း, သက်, ချင်း, ခုံ, ရင်, ကတူး, မြန်, အကျော်, ဂင်, သျှမ်း(၁၀)။ ဇ၀ါ, မျက်နှာမည်း, ကသည်း, ရေမီးထွက်, ကရက်, လ၀, လော, ပန်းလောင်, တရက်, ယွန်း (၂၀)။ စနု, ဘအူ, ကရင်, ကချင်, ဂနော, ယောန်, လ၀ိုက်, တရုပ်, ယိုးဒယား, အနဲ (၃၀)။ သျှမ်း (၃၄) မျိုး- သျှမ်း၊ ယွန်း(လာအို)၊ ကွီ၊ ဖျင်၊ သအို၊ ဓနော၊ ပလေး၊ အင်၊ စုံ(ဆံ)၊ ခမူ၊ ကော်(အခါ-အီကော)၊ ကိုးကန့်၊ ခန္တီးသျှမ်း၊ ဂုံ(ခွန်)၊ တောင်ရိုး၊ ဓနု၊ ပလောင်၊ မြောင်ဇီး၊ ယင်းကြား၊ ယင်းနက်၊ သျှမ်းကလေး၊ သျှမ်းကြီး၊ လားဟူ၊ အင်းသား၊ အိုက်ဆွယ်၊ ပအို့ဝ် (တောင်သူ)၊ တိုင်းလွယ်၊ တိုင်းလျမ်၊ ထိုင်းလုံ၊ တိုင်းလေ့၊ မိုင်းသာ၊ မောသျှမ်း၊ ၀ ။ ဘာသာနှင့်စာပေ တရုတ်ပြည်သို့ လည်းကောင်း၊ နန်ချိုသျှမ်းဒေသ သို့လည်းကောင်း၊ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာသည်6ရာစု ကတည်းက ရောက်ရှိနေကြောင်း တရုပ်မှတ်တမ်း ( DAI ARCHITECTURE ) ၌ပါရှိသည်။ ချိန်းမိုင်ကမ္ဘောဒီးယားမှ တစ်ဆင့် ပင်လယ်လမ်း(သီဟိုဠ်) မှလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုပါရှိသည်။ “ထိုငေါက်” (ပဲပင်ပေါက်) သျှမ်းစာမူ သည် ထိုအချိန်မှရှိလာသည်ဟုဆိုပါသည်၊ ထိုကာလ၌ သျှမ်းများ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်လာသည် အလျှောက် ဗုဒ္ဓ၀င်သျှမ်းစာ၊ သျှမ်းကဗျာ၊ သျှမ်းတရားတော်များ ရှိလာရပြီ။ ထို့ကြောင့် ၈-ရာစု အာသံ (အဟုမ်) ကိုသွားရောက် သိမ်းယူစဉ် ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၊ ဗုဒ္ဓ၀င်သျှမ်းစာ၊ တရားစာများ လည်းပါသွားခဲ့သည်။ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ဆိုသည်မှာ နှစ်ဟောင်းကုန်၍ နှစ်သစ်သို့ ရောက်ရှိချင်းပင်ဖြစ်သည်။ နတ်တော်လတွင် သျှမ်းလူမျိုးတို့၏ နှစ်သစ်ကူးခြင်းကား သျှမ်းလူမျိုးများသည် “သီးခြားပြက္ခဒိန်” ရှိနေခြင်းကို ဖော်ညွှန်းလျက်ရှိသည် သျှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် သမိုင်းအရ သာသနာတော်နှစ် ၄၅၀ (ဘီစီ ၉၄) တွင် သျှမ်းလူမျိုးများသည် "မူအန်မောဝ်" တိုင်းပြည်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်သည် စတုတ္ထသင်္ဂါယနာ တင်သောနှစ်လဲဖြစ်သည်။ သောဏမထေရ်သည် သျှမ်းဒေသသို့ သာသနာပြု ကြွရောက်တော်မူခဲပြီး မဇ္ဈန္တိကမထေရ်က ပိဋကတ်သုံးပုံ များကုိုယူဆောင်လာခဲ့သည် ထုိုပိဋကတ်သုံးပုံ စတင်ရောက်ရှိလာသော နှစ်ရက်ကုို အစွဲပြု၍ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များ စတင်ကျင်းပလာခဲ့သည်။
အရှင်သုခမိန္ဒ (တန့်ယန်း)၏ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ၏ ယုံကြည်မှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများ စာအုပ်မှကောက်နှုတ်တင်ပြသည်။ -->
November 13, 2013 at 4:47pm
ဂုံသျှမ်းလူမျိုးများသည် သျှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းရှိ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်သည်။ ဂုံသျှမ်းလူမျိုးများကို တနည်းအားဖြင့် တိုင်းခင် လူမျိုးဟုလည်းခေါ်သည်။ ဗုဒ္ဒ မပွင့်မှီ BC ၂၁၆ ခန့်တွင် သျှမ်းလူမျိုးများသည် တရုပ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှ အလယ်ပိုင်းသို့ လမ်းကြောင်း ၃ ကြောင်း ခွဲ၍ ဆင်းသက်လာကြရာ ဂုံသျှမ်းလူမျိုးများသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း သံလွင်မြစ် နှင့် မဲခေါင်မြစ် အနောက်လမ်းကြောင်းအတိုင်း သျှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။ ကျိုင်းတုံ ဒေသ နမ့်ခင်ချောင်းဘေးတွင် နေထိုင်ကြသော သျှမ်း များဖြစ်သည်နှင့်အညီ နမ့်ခင်ချောင်းကို အစွဲပြု၍ တိုင်းခင် (ခ) ဂုံသျှမ်း ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်..။ ဂုံသျှမ်းလူမျိုးများသည် သျှမ်းကိုးပြည်ဝင် ကျိုင်းတုံမြို့ (ကိန်းတုန်) တွင် နေထိုင်လျက် ရှိသည်။ ကျိုင်းတုံမြို့ကို ရှေးယခင်က စန္ဒာရကွမ်း ၊ ခေမရဋ် ၊ တုံဂပူရိ စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသလို ခေမာဝရ တိုင်းဂုံပြည် ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။
ကောဇာသကရာဇ် ၆၀၅ AD -1243 မှစ၍ ကောဇာသကရာဇ် ၁၃၂၄ ခုနှစ် AD – 1962 အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော စော်ဘွားဦးရေမှာ စုစုပေါင်း (၄၉)ပါးရှိသည်။ ဂုံသျှမ်း စာပေ ယဉ်ကျေး မှာ ရှေးယခင် ကပင် ရှိခဲ့သည်။ ဂုံရှမ်း စာပေများသည် အိန္ဒိယ ပြည်သုံး Brahmi နှင့် Sunskit အက္ခရာတို့ မှ တဆင့် ပလ္လ၀ အက္ခရာ အဖြစ်အသုံးပြုပြီး ခမင် (ခ) ခမာ လူမျိုးများမှ တဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံ လာအို ၊ဇင်းမယ် ၊ကျိုင်းတုံတို့ မှတဆင့် ဆစ်ဆောင်ပန်နား အထိ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သျှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ၀ နယ် ဟိုပန် ၊ ကွန်လုံ ၊ သိန္ဒီ နှင့် နမ့်ဆန် တို့တွင် လည်း ထိုစာပေ သုံးဆွဲမှုကို တွေ့ရသည်။ ဂုံသျှမ်းတို့ ၏ ရိုးရာ ထုံးစံ ထူးခြားချက်မှာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ဖြစ်သည်။
သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်မှာ ဖရား ကျောက်မထု ကျိုင်းတုံမြို့ကို အုပ်ချုပ်စဉ် သက္ကရာဇ် ၇၇၂ ခုနှစ်တွင် ဟွေပွန် ဟူသောနေရာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရာမှ မမျှော်လင့်ဘဲ တစ်နယ်လုံး မိုးခေါင် ရေရှား ဖြစ်သဖြင့် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသည့် ကပ်ဆိုးကြီးနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ ဖရားကျောက်မထု က ပုဏ္ဏားများ အား တွက်ချက်စေသောအခါ ဥတ္တမ အမည် ရှိ ပုဏ္ဏားက ကျိုင်းတုံမြို့ ၏ နေ့နံသည် တနင်္လာနံ ဖြစ်သောကြောင့် ဂုံလူမျိုး အယူရှိသူ တစ်ယောက် ၏ ပါးစပ်တွင် တနင်္လာနံ လခြမ်းကို ငုံစေလျက် သင်္ကြန် အကျနေ့တွင် သဲပုံစေတီနှင့်တကွ ဖားရုပ်ကို ပူဇော်ပသပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့မှပင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများ ထွန်ရက်စိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်္ကြန်ကာလ ရောက်တိုင်း နှစ်စဉ် ကျင်းပလာခဲ့ရာ -၁၂၆၀ ပြည့်နှစ် တွင် ကျိုင်းတုံ မြို့  ကို အုပ်ချုပ်သော စော်ဘွားကြီး စ၀်ကွန်ကျောက် အင်တလိုင်းက ကျိုင်းစံရပ်ကွက်ရှိ ဖယားဇာ အမျိုးအနွယ်ကို ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပရန် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ သင်္ကြန်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မင်္ဂလာစည်တော် ကို ထုတ်ပြီး ကျိုင်းစံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရင်ပြင်တော်မှ မိုင်းယန်းမြို့ နယ် ဟာယန်ကင်း တောင်ပေါ်နေ တိုင်းလွယ်လူမျိုးအဖွဲ့  က မင်္ဂလာစည်တော်ကို ထုတ်တီးကာ အခမ်းအနားဖြင့်ချီတက်ကာ ညလုံးပေါက် တီးပေးသည်။ သင်္ကြန်အကျနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မင်္ဂလာစည်တော်ကြီး ၊ သင်္ကြန်မင်း ရုပ်ထုနှင့် အလံဖြူ ၊အလံနီ ကိုင်ဆောင်သည့် အဖွဲ့  ကို မျိုးနွယ်ဝင် တစ်ဦး က မြင်းစီးပြီး ဦးဆောင်ကာ စီတန်းလှည့်လှည်ပြီး မိုင်းယန်းလမ်း အတိုင်း နမ့်ခင်ချောင်း သို့ ထွက်ခွာပါသည်။ ထိုအခါ ပြည်သူလူထုက တပျော်တပါး လိုက်ပါပို့ဆောင် ပြီး လမ်းခရီးတွင် လည်း ရေပက်ကစားသူများနှင့် စည်ကားလှပါသည်။ နမ့်ခင်ချောင်း လောင့်ကုတ် သို့ရောက်သောအခါ မင်္ဂလာသုတ် ရွတ်ဆိုပြီး ရွံ့ဖြင့် ပြုလုပ်သော ဖားရုပ်သင်္ကြန်မင်း ရုပ်ထုတို့ကို ချောင်းထဲသို့ မျှောချလိုက်ပါသည်။ မင်္ဂလာစည်တော်တီး အဖွဲ့ သည် လာလမ်းအတိုင်း မြို့ ထဲသို့ ၀င်ကာမြို့လယ်ရှိ ဗောဓိပင်ကြီး၌ ခေတ္တ ရပ်နားပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဆွမ်တောင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ရဟန်းတော် ၄ ပါး က အသင့်ပြင်ဆင်ထား သောပရိတ်ရေများဖြင့် ပက်ဖျန်းပြီး အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းလိုက်သည်။ သို့ဖြင့် ကျိုင်းတုံမြို့  သင်္ကြန်ပွဲ ကို ယနေ့ အထိ ကျင်းပဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဂုံသျှမ်း သို့မဟုတ် တိုင်းခင်လူမျိုးတို့ အသုံးပြုသည် ဗျည်းအက္ခရာ
လꨯꨤးꨅ်ꨮꨵFacebook Photo Zoom Add ons တီꨳꨓ်ꨮး Mozilla Firefox သေ တူꨉ်းꨁꨰပ်းꨟꨤင်ꨳတီꨳꨓ်ꨮးFacebook (တီꨳꨓ်ꨮးꨁွမ်း)
မ်ꨮꨲသုင် ပီꨳꨓွင်ꨵꨟဝ်းꨁဝ်တင်းသꨱင်ꨳ ꨅိူဝ်ꨳမꨣးꨡꨰဝ်ꨲꨟွတ်ꨳ ꨓ်ꨮးဝꨰပ်ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ်ꨲꨓꨯꨵတင်းသꨱင်ꨳ
ꨅဝ်ꨳတꨯးꨓုမ်ꨲ ꨡမ်ꨲလꨯꨳတꨰမ်ꨳတꨤင်ꨲဝꨰပ်ꨵသꨯꨤꨵေꨀꨣꨳ ꨟိုင်ယဝ်ꨵဝꨣꨳ၊ လိူတ်ꨳမꨓ်းꨁ်ꨮꨳꨀတ်းယဝ်ꨵယူဝ်ꨵထꨤင်ꨲꨬတꨵ
မိူဝ်ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ တေမꨣးမွꨀ်ꨲလꨤတ်ꨳꨬꨓပꨓ် လွင်ꨳꨁွမ်းꨡိတ်းꨡွတ်း
ပေꨣးတူꨉ်းꨁꨰပ်းꨟꨤင်ꨳတီꨳတ်ꨮးFacebookပေꨣးꨓꨯꨅိုင် ပေꨣးဝꨣꨳပိူꨓ်ꨳတꨤင်ꨲဝꨯꨵ သွင်ꨲꨕꨤင်ꨁိုꨓ်ꨳꨓိူဝ်ꨓꨯꨬတꨵ
ယွꨓ်ꨵဝꨣꨳꨟꨓ်လꨱꨀ်ꨵ/ꨀꨯꨓꨣꨲꨬလꨳ ငွꨀ်ꨳတူꨉ်းꨓꨣꨳꨕꨤꨀ်ꨲသမ်ꨵပေꨣးꨁ်ꨮꨳထိ ꨓꨣꨳꨁွမ်းꨓꨓ်ꨵယဝ်ꨵဝꨣꨳ
သင်ဝꨣꨳပီꨳꨓွင်ꨵꨟဝ်းꨁဝ်ꨅ်ꨮꨵ Mozilla Firefoxꨓꨯꨅိုင် သ်ꨮꨲAdd-ons မꨓ်းသေတူꨉ်းပေꨣးဝꨣꨳꨓꨯꨅိုင်
ပေꨣးသ်ꨮꨲFacebook Photo Zoomသေ
တူꨉ်းꨓꨯꨅိုင် ပေꨣးဝꨣꨳꨡဝ်ꨓူꨀꨮꨣꨲငꨣသ်ꨮꨲတီꨳꨁꨰပ်းꨟꨤင်ꨳꨓꨓ်ꨵေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨟꨓ်ꨁꨰပ်းꨟꨤင်ꨳꨓꨓ်ꨵ ꨬꨓပꨓ်ယ်ꨮꨲ꨸ꨅမ်꨸
ပေꨣးဝꨣꨳꨡဝ်ꨓူꨀꨮꨣꨲငꨣသ်ꨮꨲပေꨣးꨓꨯꨅိုင် လꨯꨳꨟꨓ်ꨬꨓဝꨯꨵ ꨕꨤင်ꨲယ်ꨮꨲꨓင်ꨲꨓꨯ
လꨯꨤးသ်ꨮꨲမꨓ်းလူး တေလꨯꨳꨟꨱတ်းꨅိူင်ꨵꨟိုဝ်ꨡꨓ်ဝꨣꨳꨓꨓ်ꨵ လꨱပ်းꨟꨱတ်းတူꨉ်းꨓင်ꨲတ်ꨮꨳꨓꨯꨵ
ꨡွꨓ်တꨤင်းသုတ်း ꨁဝ်ꨳတီꨳTools သေ လိူꨀ်ꨳꨓꨱꨀ်းAdd-ons ꨀမ်းꨓိုင်ꨳတꨣꨵ။
တေꨡွꨀ်ꨲမꨣးꨓင်ꨲတ်ꨮꨳꨓꨯꨵ ပေꨣꨵသ်ꨮꨲတီꨳꨓ်ꨮးလွꨀ်းꨓꨓ်ꨵဝꨣꨳ (Facebook Photo Zoom) ꨓꨯသေ
လိူꨀ်ꨳꨟꨣꨡဝ်ꨡꨓ်ပꨱꨓ်Facebook Photo Zoomꨓꨓ်ꨵ ꨓꨱꨀ်းInstallသေ သꨮꨤင်းတꨣꨵ။
ꨓꨱꨀ်းတီꨳRestartꨓꨓ်ꨵꨀမ်းꨓိုင်ꨳသေ ꨡꨓ်ပꨱꨓ် Mozilla Firefoxꨓꨓ်ꨵ တေမွတ်ꨲꨀွꨣꨲꨀမ်းꨓိုင်ꨳ
တေꨁိုꨓ်ꨳမꨣးꨁိုꨓ်း ပေꨣးꨓꨓ်ꨵ ꨕုꨉ်ꨲတူꨉ်းတီꨳꨓ်ꨮးFacebookꨅဝ်ꨳꨀဝ်ꨲသေ
ꨡဝ်ꨓူငꨣသ်ꨮꨲတီꨳꨁꨰပ်းꨟꨤင်ꨳꨅိူဝ်းꨓꨓ်ꨵတူꨉ်းꨬလꨳ တေလꨯꨳꨟꨓ်ꨁꨰပ်းꨟꨤင်ꨳꨓꨓ်ꨵ ꨬꨓပꨓ်ꨅမ်꨸ꨀမ်းလꨱဝ်ယဝ်ꨵ။
ꨕူꨳꨅ်ꨮꨵတိုဝ်းꨕူင်းAndroidꨁဝ် ပေꨣးꨀꨯꨵလိုမ်းတီꨳဝꨯꨵမꨓ်းꨅိုင် ꨕိဝ်လူမ်းသေꨟꨣꨡဝ်ꨬလꨳ
မ်ꨮꨲသုင် ပီꨳꨓွင်ꨵတꨯးꨟဝ်းꨁဝ်တင်းသꨱင်ꨳ မိူဝ်ꨳꨓꨯꨵ ꨅဝ်ꨳꨅꨤင်းတေမꨣးꨕꨤꨀ်ꨲတွꨓ်ꨳပꨓ် တꨤင်းꨟူꨵမေꨣလွင်ꨳꨕူင်း
ပꨓ်ပီꨳꨓွင်ꨵꨟဝ်းꨁဝ်၊ ပီꨳꨓွင်ꨵꨟဝ်းꨁဝ်ꨅိူဝ်းယိုပ်းတိုဝ်းꨕူင်းAndroid ꨓꨓ်ꨵ ပေꨣးဝꨣꨳꨀꨯꨵလိုမ်းတီꨳဝꨯꨵမꨓ်းꨅိုင်
ꨀူꨓ်းꨟဝ်ꨳꨓꨯꨵမꨤင်ပွꨀ်ꨳမꨤင်လ်ꨮꨀꨯꨵလိုမ်းꨓꨣꨲ ဝꨯꨵတီꨳꨓိုင်ꨳ ꨟꨣတီꨳꨓိုင်ꨳꨓꨓ်ꨵယဝ်ꨵ
ပေꨣးဝꨣꨳꨅꨓ်ꨡဝ်ယဝ်ꨵ ꨡဝ်သ်ꨮꨲတီꨳꨓ်ꨮးSD card ꨕူင်းꨅဝ်ꨳꨀဝ်ꨲတꨣꨵ
ꨀမ်းꨓꨯꨵတꨣꨲတေသꨮꨤင်းမꨓ်းꨁဝ်ꨳတီꨳMy file တꨣꨵ
(တီꨳꨓꨯꨳ ꨕူင်းလုꨀ်ꨳꨓိုင်ꨳꨬလꨳလုꨀ်ꨳꨓိုင်ꨳတေꨡမ်ꨲမိူꨓ်ꨀꨓ် )
ꨅꨣꨲတေသꨮꨤင်းမꨓ်းꨓꨓ်ꨵꨬတꨵ ꨅဝ်ꨳꨀဝ်ꨲဝꨯꨵတီꨳလ်ꨮꨓꨯေꨀꨣꨳ လိူꨀ်ꨳꨟꨣꨡဝ်သေ
ပေꨣꨳဝꨣꨳသꨮꨤင်းယဝ်ꨵ လိူꨀ်ꨳꨟꨣꨟꨤင်ꨳမꨓ်ꨳတီꨳꨓ်ꨮးꨕူင်းꨟဝ်းꨓꨓ်ꨵ ꨓꨱꨀ်းတီꨳWhistle_Locator_PROꨓꨓ်ꨵꨀမ်ꨳꨓိုင်ꨳ
ꨡꨓ်လꨯꨳꨟꨓ်ꨓင်ꨲတ်ꨮꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨡꨓ်ꨀꨮꨤင်းဝꨯꨵလꨰင်꨸ꨓꨓ်ꨵ ပေꨣးလူဝ်ꨲꨅ်ꨮꨵေꨀꨣꨳမꨯꨤပꨓ် ပေꨣးꨡမ်ꨲလူဝ်ꨲꨅ်ꨮꨵေꨀꨣꨳ
တေꨡွꨀ်ꨲမꨣးꨓင်ꨲတ်ꨮꨳꨓꨯꨵ လိူꨀ်ꨳꨡဝ်ꨡꨓ်ပꨱꨓ်High Sensitivityꨓꨓ်ꨵတꨣꨵ
ပေꨣးလိူꨀ်ꨳꨡဝ်ꨡꨓ်တ်ꨮꨳသုတ်းꨓꨓ်ꨵꨬတꨵ ပေꨣးငိꨓ်းသꨱင်မေꨣးတꨤꨓ်ꨲ꨸ေꨀꨣꨳ ꨕူင်းꨟဝ်ꨳꨓꨯꨵꨟွင်ꨵꨀမ်းလꨱဝ်ယဝ်ꨵဝꨣꨳ
( ꨡူꨉ်းေꨀꨣꨵꨅဝ်ꨳေꨀꨣꨵꨓိုင်ꨳဝꨣꨳ ပေꨣးꨡဝ်ꨡꨓ်တ်ꨮꨳသုတ်းꨓꨓ်ꨵꨬတꨵ ꨀꨯꨲꨁꨓ်ေꨀꨣꨳꨟွင်ꨵꨀမ်းလꨱဝ်ဝꨣꨲ)
ꨀမ်းꨓꨯꨵလိူꨀ်ꨳသꨱင်မꨓ်းꨓꨱꨀ်းတီꨳNotification sound Selectionꨓꨓ်ꨵတꨣꨵ
Posted by တꨯးꨓုမ်ꨲ at 10:43 PM
ဝꨰပ်ꨵသꨯꨤꨵ ’’ꨟဝ်းꨁꨣꨳꨓꨯꨵ ꨡမ်ꨲꨅ်ꨮꨳဝꨣꨳမေꨣꨓꨣꨲသေꨬလꨳ ꨟꨱတ်းꨁꨣꨳ ယွꨓ်ꨵဝꨣꨳꨁ်ꨮꨳꨟ်ꨮꨳ လိꨀ်ꨳတꨯးꨟဝ်းꨁိုꨓ်ꨳꨕꨰဝ်တီꨳꨓိူဝ်ꨀꨤင်ꨟꨤဝ်ꨓင်ꨲပိူꨓ်ꨳသေ ꨁ်ꨮꨳꨟ်ꨮꨳလိꨀ်ꨳတꨯးꨟဝ်းꨅꨱဝ်းလꨯꨳꨁိုꨓ်ꨳယ်ꨮꨲပꨱင်းပိူꨓ်ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅွမ်းꨓင်ꨲꨀꨮꨤမ်းမီးဝꨯံဝꨣꨳ‘‘ꨓူꨀ်ꨵꨅွꨀ်ꨲပေꨵလꨰမ်ꨳꨁꨣး ꨅꨤင်ꨵငꨣးပေꨵတုမ်မꨯꨵ’’ꨓꨯꨁꨣꨳꨓꨣꨲꨲ ယွꨓ်ꨵꨓꨯ ꨬလꨳ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳꨅွမ်းꨓင်ꨲꨁꨣꨳပွင်ပꨱꨓ်လꨯꨳ ꨅွမ်းꨓင်ꨲꨡꨓ်ꨁꨣꨳꨟꨤပ်ꨲပေꨵလꨯꨳꨓꨓ်ꨵသေ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ တေꨡဝ်ꨀꨤꨓ်ꨕꨯꨤꨲ လိꨀ်ꨳလꨯꨤးꨓꨯꨵသေꨅွꨯꨳထꨰမ်ꨀꨤꨓ်ꨁိူဝ်းꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳꨵꨵꨵမ်ꨮꨲသုင်ꨀူꨶေꨀꨣꨵꨵꨁꨣꨳꨵꨵ
လူတ်ꨲꨡဝ် Android tai တꨣꨲꨅ်ꨮꨵꨓ်ꨮး သꨯꨤꨶ (ꨘူင်း)
Shan Information - ข้อมูลข่าวสารไต(ไทใหญ่)
Tai Literary and Cultural Centre
Tai4Freedom - Freedom and Justice for Shan States, Burma
မ်ꨮꨲသုင် ꨟ်ꨮꨳယူꨲလီမီးငိုꨓ်း ꨟ်ꨮꨳꨟꨤင်ꨶလီꨀိုꨀ်းပိုꨓ်းသေꨀမ်းꨁꨣꨳ
Download zaw gyi tai font
ယိꨓ်းꨅူမ်းꨟပ်ꨵတွꨓ်ꨶယူꨲꨀူꨶေꨀꨣꨵꨀူꨶꨅဝ်ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ. Travel theme. Theme images by RBFried. Powered by Blogger.